• ဆီးကျိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးနေလဲ?
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အကြောင်း …
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ?
– အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ခြင်း
– မျိုးရိုးတွင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိခြင်း (အဖိုး၊ အဖေ၊ ဦးလေး၊ အစ်ကို စသည်…)
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါဟာ ဘယ်လို လက္ခဏာမျိုးတွေရှိပြလေ့ရှိသလဲ ?
– ဆီးသွားရန် ခက်ခဲခြင်း
– ဆီးသွားသောအရှိန် အားလျော့ခြင်း
– (အထူးသဖြင့် ညပိုင်းတွင်) ဆီးခဏခဏ သွားရခြင်း
– ဆီးသွားပြီးတိုင်း ဆီးကျန်သည်ဟုခံစားရခြင်း
– ဆီးပူ/ ဆီးကျဉ်ခြင်း
– ဆီးထဲတွင် သွေးပါခြင်း
– ခါးအောက်ပိုင်း၊ တင်ပဆုံ နှင့် ဆီးခုံ စသည့်နေရာများတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
– သုတ်လွှတ်ချိန်တွင် နာကျဉ်ခြင်း
– ပါးစပ်ပျက်ကာ ကိုယ်အလေးချိန်သိသိသာသာလျော့ကျလာခြင်း
– ခြေထောက် အားနည်းခြင်း နှင့် ထုံကျင်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာ များပြသတတ်ပါတယ်။
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါကို စောစီးစွာသိနိုင်ပါသလား ?
– စောစီးစွာ သိနိုင်ပါတယ်။
– အကယ်၍ PSA (Prostate Specific Angitigen) လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဓါတ် မြင့်မားနေပြီ ဆိုပါက သေချာစေရန် Digital Rectal Examination (DRE) လို့ခေါ်တဲ့ စအိုမှတဆင့် ဆီးကျိတ်က်ို လက်ဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသားစ နမူနာယူခြင်းတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်လာပါက ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကုသလို့ရနိုင်ပါသလဲ ?
– ဆီးကျိတ် ကင်ဆာကို ရောဂါအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် –
o အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကာ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သောကုသမှုပေးခြင်း
o ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသခြင်း (ဓါတ်ကင်ခြင်း)
o ဟိုမုန်းဖြင့်ကုသခြင်း စသည့်နည်းများထဲမှ
• ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ ?
– ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်လို့မရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပါက ထိရောက်သောကုသမှုဖြင့် လူ့သက်တမ်းစေ့နေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
• ဆီးကြိတျဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာလုပျငနျးတှလေုပျပေးနလေဲ?
• ဆီးကြိတျကငျဆာ အကွောငျး …
• ဆီးကြိတျကငျဆာ ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ?
• ဆီးကြိတျကငျဆာရောဂါဟာ ဘယျလို လက်ခဏာမြိုးတှရှေိပွလရှေိ့သလဲ ?
• ဆီးကြိတျကငျဆာရောဂါကို စောစီးစှာသိနိုငျပါသလား ?
• ဆီးကြိတျကငျဆာ ဖွဈလာပါက ဘယျလိုနညျးတှနေဲ့ ကုသလို့ရနိုငျပါသလဲ ?
• ဆီးကြိတျကငျဆာ မဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျလို့ရနိုငျပါသလဲ ?